လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်အကြောင်းအရာနှင့်သက်တူရွယ်တူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ about အပေါ်ယုံကြည်ချက်အပေါ်သက်ရောက်မှု - ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများနှင့်တူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများ (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2011 Sep;14(9):511-7. doi: 10.1089/cyber.2010.0189.
ပတေရုသ J ကို1, Valkenburg pm တွင်.
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ about နှင့်ပတ်သက်သောယုံကြည်ချက်အပေါ်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း (SEIM) ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်ယခင်လေ့လာမှုတွင်အားနည်းချက်သုံးခုရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာရွယ်တူများ၏အခန်းကဏ္negကိုလျစ်လျူရှုထားပြီး ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် SEIM ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူချင်းများရွေးချယ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပုံစံအမျိုးမျိုးယုံကြည်မှုများကိုခဲယဉ်းသည်။ တတိယအချက်မှာဆယ်ကျော်သက်များသည် SEIM ၏သက်ရောက်မှုများကိုလူကြီးများထက်ပိုမိုထိခိုက်လွယ်မှုရှိ၊ မရှိမသိရသေးပါ။
တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားပြုလှိုင်း ၂ ခုပါ ၀ င်သည့်စစ်တမ်းနှစ်ခုမှဒတ်ခ်ျဆယ်ကျော်သက် ၁၄၄၅ ယောက်နှင့်ဒတ်ခ်ျအရွယ်ရောက်သူ ၈၃၃ တို့၏အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ အမျိုးသမီးများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုအလေးအနက်ထားသည်။ လိင်ဆက်ဆံပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းပုံစံကရိုးရာကျားမအခန်းကဏ္supportedကိုထောက်ပံ့သောရွယ်တူချင်းများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအကြားနှစ် ဦး စလုံးသည်အမျိုးသမီးများသည်လိင်မှုကိစ္စကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ထို့အပြင်အမျိုးသမီးများ၏လက္ခဏာများကိုခုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟူသောယုံကြည်ချက်သည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ကျားမအခန်းကဏ္ traditional ရိုးရာရွယ်တူများရွေးချယ်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသော်လည်း SEIM ၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူကြီးများအသုံးပြုမှုကိုမူမခန့်မှန်းခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူကြီးများ, ဒါပေမယ့်မရမြီးကောင်ပေါက်, အမျိုးသမီးလိင်မှတိုကင်နံပါတ်ခုခံအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းယုံကြည်ချက်အပေါ် SEIM များ၏သက်ရောက်မှုမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။